တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ဂျပန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် H.E. Mr. Shinzo ABE ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. Toshimitsu MOTEGI တို့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
အောက်တိုဘာ ၉၊ ၂၀၁၉
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ဂျပန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် H.E. Mr. Shinzo ABE ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. Toshimitsu MOTEGI တို့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
မိမိတို့ နှဈနိုငျငံ၏ ဆကျဆံရေးသညျ မွနျမာနိုငျငံလှတျလပျရေးကွိုးပမျးမှုသမိုငျးနှငျ့ အတူ ယှဉျတှဲပျေါပေါကျခဲ့သညျဟုဆိုရမညျဖွဈသကဲ့သို့ မွနျမာ့တပျမတျောသန်ဓတေညျ ပေါကျဖှားခဲ့မှု သမိုငျးတှငျလညျး ဂပြနျတပျမတျော၏ အခနျးကဏ်ဍကို ခနျြလှပျထား၍ မရနိုငျပါကွောငျး၊ ရခိုငျပွညျနယျအရေးကိစ်စတှငျ မွနျမာနိုငျငံဘကျမှ မှနျကနျစှာ ရပျတညျပေးခဲ့သညျ့အတှကျ ကြေးဇူးတငျရှိပါကွောငျးနှငျ့ ဂပြနျနိုငျငံသညျ မွနျမာနိုငျငံ၏ မိတျဆှဟေောငျး၊ မိတျဆှကေောငျးနိုငျငံ ဖွဈသကဲ့သို့ မွနျမာနိုငျငံသညျလညျး ဂပြနျနိုငျငံ၏ မိတျဆှဟေောငျး၊ မိတျဆှကေောငျး နိုငျငံဖွဈပါကွောငျးဖွငျ့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျက ဂပြနျနိုငျငံဝနျကွီးခြုပျ H.E. Mr. Shinzo ABE အား ယနမှေ့နျးလှဲပိုငျးတှငျ ဝနျကွီးခြုပျရုံး၌ သှားရောကျ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးစဉျ ထညျ့သှငျးပွောကွားသညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး ညိုစော၊ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျ ဂပြနျနိုငျငံဆိုငျရာ မွနျမာနိုငျငံသံအမတျကွီး ဦးမွငျ့သူ၊ မွနျမာစဈသံ(ကွညျး၊ရေ၊လေ) ဗိုလျမှူးကွီး တငျစိုးတို့တကျရောကျကွပွီး ဂပြနျနိုငျငံ ဝနျကွီးခြုပျနှငျ့အတူ တာဝနျရှိသူမြား တကျရောကျကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲတှငျ တပျမတျောနှဈရပျအကွားပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှု မွှငျ့တငျရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြား၊ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျးအကွမျးဖကျလုပျရပျမြား ပျေါပေါကျလာသညျ့ အခွအေနမြေားနှငျ့ တပျမတျောက ဥပဒနှေငျ့အညီ ထိနျးသိမျးဆောငျရှကျခဲ့မှုအခွအေနမြေား၊ ပွညျတှငျး ငွိမျးခမျြးရေး ရရှိရေးနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ တပျမတျောမှ တဈဖကျသတျအပဈ ရပျစဲပေးခဲ့ပွီး ငွိမျးခမျြးရေး ဆှေးနှေးပှဲမြား ပွုလုပျလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေား၊ ဒသေတှငျး ငွိမျးခမျြးရေးနှငျ့ ကမ်ဘာ့ငွိမျးခမျြးရေး ဆိုငျရာမြားတှငျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးကိစ်စရပျမြား၊ နှဈနိုငျငံပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှု မွှငျ့တငျရေး ဆောငျရှကျလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေား၊ မွနျမာ့တပျမတျော ခတျေမီတပျမတျောဖွဈရေး အဆငျ့မွှငျ့တငျရေးတှငျ ဂပြနျနိုငျငံမှ အကူအညီပေးလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေား၊ နှဈနိုငျငံ တပျမတျောနှဈရပျအကွား ဆကျဆံရေးသညျ ရှညျလြားသညျ့ သမိုငျးကွောငျးရှိခဲ့ပွီး ဆကျလကျပွီး ပိုမိုတိုးတကျခိုငျမာအောငျ တညျဆောကျသှားမညျ့ အခွအေနမြေားအား ခငျမငျရငျးနှီးစှာ ဆှေးနှေး ခဲ့ကွသညျ။
ထို့နောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ ဂပြနျနိုငျငံ၊ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး ဌာနသို့သှားရောကျ၍ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး Mr.Toshimitsu MOTEGI နှငျ့တှဆေုံ့ဆှေးနှေးခဲ့သညျ။ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးရာတှငျ ရခိုငျပွညျနယျအရေးကိစ်စနှငျ့ ငွိမျးခမျြးရေးဆိုငျရာဆောငျရှကျမှုမြားတှငျ ဂပြနျနိုငျငံမှ မိတျဆှစေိတျဓာတျဖွငျ့ ကူညီဆောငျရှကျပေးလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေား၊ ပွညျတှငျးလကျနကျကိုငျ အဖှဲ့အစညျးမြား၏ ပျေါပေါကျလာပုံ နောကျခံသမိုငျးကွောငျး မတူညီသညျ့ အခွအေနမြေား၊ နရေပျစှနျ့ခှာဒုက်ခသညျစခနျးမြားမှ ဒုက်ခသညျမြားအား သကျဆိုငျရာ နရေပျ အသီးသီးတှငျ ပွနျလညျအခွခေနြထေိုငျနိုငျရေး ကွိုးပမျးဆောငျရှကျလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေား၊ အငျဒို-ပစိဖိတျဒသေတှငျး လုံခွုံရေးဆိုငျရာ သဘောထားအမွငျမြားနှငျ့ ဒသေတှငျး ခွိမျးခွောကျမှု မြားကို ရငျဆိုငျနိုငျရေး၊ နြူကလီးယားလကျနကျနှငျ့ ဖကျြအားပွငျး လကျနကျမြား ကငျးစငျသညျ့ ကမ်ဘာကွီးဖွဈစရေေး နိုငျငံအားလုံး ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရနျ လိုအပျသညျ့ အခွအေနမြေား၊ လှတျလပျသောစုံစမျးစဈဆေးရေးကျောမရှငျ၏ ဆောငျရှကျမှုမြားတှငျ မွနျမာ့တပျမတျောမှ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေား၊ နိုငျငံတိုငျးရှိ တပျမတျောတိုငျးသညျ မိမိနိုငျငံ၏ လုံခွုံရေးနှငျ့ ပွညျသူလူထု၏ အသကျအိုးအိမျစညျးစိမျကို အပွညျ့အဝကာကှယျစောငျ့ရှောကျရနျ တာဝနျရှိသညျ့ အခွအေနမြေားအား ခငျမငျရငျးနှီးစှာဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ဆှေးနှေးပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက ဂပြနျနိုငျငံ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးအား အထိမျးအမှတျတံဆိပျနှငျ့ အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျး ပေးအပျခဲ့သညျ။
မိမိတို့ နှစ်နိုင်ငံ၏ ဆက်ဆံရေးသည် မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုသမိုင်းနှင့် အတူ ယှဉ်တွဲပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ မြန်မာ့တပ်မတော်သန္ဓေတည် ပေါက်ဖွားခဲ့မှု သမိုင်းတွင်လည်း ဂျပန်တပ်မတော်၏ အခန်းကဏ္ဍကို ချန်လှပ်ထား၍ မရနိုင်ပါကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စတွင် မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ မှန်ကန်စွာ ရပ်တည်ပေးခဲ့သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ မိတ်ဆွေဟောင်း၊ မိတ်ဆွေကောင်းနိုင်ငံ ဖြစ်သကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံသည်လည်း ဂျပန်နိုင်ငံ၏ မိတ်ဆွေဟောင်း၊ မိတ်ဆွေကောင်း နိုင်ငံဖြစ်ပါကြောင်းဖြင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် H.E. Mr. Shinzo ABE အား ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ဝန်ကြီးချုပ်ရုံး၌ သွားရောက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ် ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ညိုစော၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ် ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး ဦးမြင့်သူ၊ မြန်မာစစ်သံ(ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်မှူးကြီး တင်စိုးတို့တက်ရောက်ကြပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အတူ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲတွင် တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ ပေါ်ပေါက်လာသည့် အခြေအနေများနှင့် တပ်မတော်က ဥပဒေနှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုအခြေအနေများ၊ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် တပ်မတော်မှ တစ်ဖက်သတ်အပစ် ရပ်စဲပေးခဲ့ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး ဆိုင်ရာများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စရပ်များ၊ နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ မြန်မာ့တပ်မတော် ခေတ်မီတပ်မတော်ဖြစ်ရေး အဆင့်မြှင့်တင်ရေးတွင် ဂျပန်နိုင်ငံမှ အကူအညီပေးလျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ဆက်ဆံရေးသည် ရှည်လျားသည့် သမိုင်းကြောင်းရှိခဲ့ပြီး ဆက်လက်ပြီး ပိုမိုတိုးတက်ခိုင်မာအောင် တည်ဆောက်သွားမည့် အခြေအနေများအား ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာနသို့သွားရောက်၍ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr.Toshimitsu MOTEGI နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်မှုများတွင် ဂျပန်နိုင်ငံမှ မိတ်ဆွေစိတ်ဓာတ်ဖြင့် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ ပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပေါ်ပေါက်လာပုံ နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း မတူညီသည့် အခြေအနေများ၊ နေရပ်စွန့်ခွာဒုက္ခသည်စခန်းများမှ ဒုက္ခသည်များအား သက်ဆိုင်ရာ နေရပ် အသီးသီးတွင် ပြန်လည်အခြေချနေထိုင်နိုင်ရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ အင်ဒို-ပစိဖိတ်ဒေသတွင်း လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ သဘောထားအမြင်များနှင့် ဒေသတွင်း ခြိမ်းခြောက်မှု များကို ရင်ဆိုင်နိုင်ရေး၊ နျူကလီးယားလက်နက်နှင့် ဖျက်အားပြင်း လက်နက်များ ကင်းစင်သည့် ကမ္ဘာကြီးဖြစ်စေရေး နိုင်ငံအားလုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့် အခြေအနေများ၊ လွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်၏ ဆောင်ရွက်မှုများတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်မှ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ နိုင်ငံတိုင်းရှိ တပ်မတော်တိုင်းသည် မိမိနိုင်ငံ၏ လုံခြုံရေးနှင့် ပြည်သူလူထု၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို အပြည့်အဝကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် တာဝန်ရှိသည့် အခြေအနေများအား ခင်မင်ရင်းနှီးစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ဂျပန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအား အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်နှင့် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်း ပေးအပ်ခဲ့သည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အား ဂျပန်ကိုယ်ပိုင်ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့များ၏ ပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ်က ဂုဏ်ပြုကြိုဆို၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
ဒီဇင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၇ Admin 0
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ ငွိမျးခမျြးရေးပူးပေါငျးရံပုံငှေ အဖှဲ့ (JPF) ဥက်ကဋ်ဌ၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဖငျလနျနိုငျငံသံအမတျကွီးအား လကျခံတှဆေုံ့(ရုပျသံသတငျး) နပွေညျတျော၊ ဖဖေျောဝါရီ – ၁၉
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ (၄၁)